Tirada dadka Martech Zone | Martech Zone
Tirada dadka Martech Zone
Saturday, April 10, 2010 Sabtida, Juun 27, 2015 Douglas Karr
Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay inaan socodsiinay a Ciriiri badan sahamin ku saabsan baloogga in muddo ah hadda. Waxaan rajeynayaa inaad waqti ku bixisay inaad ka jawaabto sahannada - natiijooyinka aad bay u fiican yihiin. Waa kuwan waxyaabaha muhiimka ah:
62.5% akhristayaasha ayaa ah ardayda ka qalin jabisay kuliyadaha, 21.9% ayaa leh shahaadada qalin-jabinta
51.6% akhristayaasha ayaa ah shaqeeya waqti buuxa, 32.3% waa iskiis u shaqeysta.
Aqristayaasha badankood waa go'aan qaadayaasha ama saameyn ku yeeshaan:
Akhristeyaashu waxay ka yimaadeen shirkado nooc kasta leh:
Aqristayaasha badankood waa hawl wadeennada sare ama hoggaamiyeyaasha shirkadahooda.
Aqristayaasha badankood waxay kujiraan 34 ilaa 44 da'da.
56.3% akhristayaasha waxay leeyihiin a xoogaa aragti xun dhaqaalaha.
Aqristayaasha badankood ayaa sameeya in ka badan $ 75k, oo badan oo kor u dhaafaya $ 150k.
Aqristayaasha badankood waxay adeegsadaan internetka in ka badan 24 saacadood usbuucii, oo seddex meelood meel ka badan 36 saacadood usbuucii.
Waxaa laga yaabaa in xiisaha ugu badani uu ahaa dabeecadaha qaarkood ee ku aaddan ganacsiga - in ka badan kala badh akhristayaasha ayaa sheegay inay xiiseynayaan ganacsi iyaga u gaar ah iyo / ama beddelashada shaqooyinka iyo shaqooyinka. Sida ganacsade taxane ah (aka - nin jecel inuu ka soo kabto hal caqabad illaa kan xiga), tani waxay ahayd mid xiiso ii leh. Waqti ka dib, waxay ii soo jeedin laheyd inaan soo jiito akhristayaasha isku fikirka ah ee baloogga.
Tirakoobkan dadku waa halka aan jeclaan lahaa in balooggu noqdo arrin saamayn iyo waxtar leh!
Google Wuxuu Dilay Xiddiga Google Analytics
Ku shaandheeya meheraddaada Google Apps
Apr 10, 2010 at 11: 36 AM
Xiiso iyo mahadsanid wadaagida macluumaadka iyo qalabka! Xog nin xog ogaal ah!
Farxad iyo Salaan Fiican,